दिनेश गौतम काठमाडौं, ४ जेठ
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) कारण नेपालमा २ जनाको मृत्यु भयो । सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरी महिला र बाँकेका १ पुरुषको मृत्यु भएको हो । संक्रमितको संख्या पनि उकालो चढ्दै छ ।
अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या २ सय ९१ पुगेको छ । भाइरसको लक्षण पनि मान्छेअनुसार फरकफरक देखिन थालेको छ । भाइरसमा छिटोछिटो उत्परिवर्तन भएका कारण यो हो भन्ने अवस्था छैन । औषधि उपचार र भ्याक्सिन कहिले पत्ता लाग्ने हो, ठेगान छैन ।
संक्रमितको संख्या बढिरहँदा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको पूर्वतयारीमा सरकार चुकेको विज्ञहरू बताउँछन् । समयमै सजगता र तयारी नगर्ने हो भने नेपालमा खराब दिन आउने विज्ञ बताउँछन् ।
नेपालमा र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) र रियल टाइम (पीसीआर) विधिबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण भइरहेको छ । अहिलेसम्म पीसीआरबाट २८ हजार १ सय ६० र आरडीटीबाट ६७ हजार ७ सय ६९ जनाको परीक्षण गरिएको छ । तर, परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ नेगेटिभ के आएको हो, त्यो पीसीआरको मात्र देखाउने गरेको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ । सरकारले आमनागरिक र विश्व समुदायलाई झुक्याइरहेको छ ।
‘यति हजारको परीक्षण गर्‍यौँ भनेर सरकारले झुक्याइरहेको छ,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. पदम सिम्खडा भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो लोकप्रियता देखाउन यतिको परीक्षण गर्‍यौँ भनेको हो । परीक्षणपछि रिपोर्ट पीसीआरको मात्र देखाएको छ । आरडीटीको छैन ।’
पीसीआर विधिलाई बढाउनुपर्छ
जनस्वास्थ्यविद् डा. पदम सिम्खडाका अनुसार सुरुको अवस्थामा आरडीटी विधिबाट परीक्षण गर्नु उपयुक्त मानिदैन । डब्लूएचओले समेत आरडीटीभन्दा पीसीआर विधिको परीक्षण बढाउन भन्दै आएको छ । तर, सरकारले भने आरडीटी परीक्षणलाई निरन्तरा दिइरहेको छ । आरडीटीले कोरोना भाइरस छ छैन भनेर पत्ता लगाउँदैन । यसले त शरीरमा एन्टिबडीको लेबल के छ भनेर जाँच गर्ने हो । कोरोना भाइरस भए/नभएको पीसीआर विधिबाट थाहा पाइन्छ ।
बाहिरबाट आएकाको व्यवस्थापमा चुक्यो सरकार
डा. सिम्खडा भन्छन्, 'संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ, विशेषगरी नेपालमा भारतबाट आएकाहरूमा संक्रमण देखिएकोे छ, यसको मुख्य कारण फर्किएका मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो ।'
उनले सीमानाका हुँदै आएका मान्छेको सही व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘ खुला सीमा छ । कोही लुकेर, कोही नदी तरेर आएका छन् । ती मान्छेको परीक्षण भएको खोइ ? उनीहरूको परीक्षण गरेर पोजिटिभ देखिए अस्पताल वा क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने हो ।’
काठमाडौंमा पनि केस छ
काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या रहेको डा. सिम्खडाले बताए । ‘परीक्षण कम भएकाले थोरै केस देखिएको हो,’ उनले भने, ‘पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्ने हो भने काठमाडौंमै धेरै भेटिन्छन् ।’ बाहिरबाट आएकालाई म्यानेज गर्न सकिएन भने जोखिम अझ बढ्ने उनकाे भनाइ छ ।
ट्रिपल ‘टी’मा जोड दिनुपर्छ
भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले त्रिपल ‘टी’ मा जोड दिनुपर्ने हो । तर, यसमा पनि सरकार चुकेको छ । ट्रयाक, ट्रेसिङ र टेस्टिङ द्रुत गतिमा हुन सकेको छैन । त्यसैले अहिले संक्रमितको संख्या कम देखिएको हो । ‘ट्रयाक, ट्रेसिङ र टेस्टिङ देखाउने काम मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।’
लकडाउन मात्र 'सोलुसन' होइन
लकडाउन भएको २ महिना पुग्न लाग्यो । लकडाउन थप्ने काम मात्र भएको छ । तर, यसको विकल्प के हो, सरकारले बनाउन सकेको छैन । ‘लकडाउन आवश्यक छ । तर, लकडाउन मात्र सोलुसन होइन,’ उनले भने, ‘मान्छे घरमा थुनेर तगारो सकिन्छ भन्ने होइन । विकल्प खोज्नुपर्छ ।’
नेपालमा भीड कम भएकाले कम जोखिम
नेपालमा जनसंख्या पनि थोरै छ । यहाँ भीडभाड हुने ठाउँ पनि छैन । युरोप, अमेरिका, बेलायतमा जस्तो धेरै भीड हुने ठाउँ छैन । त्यसैले सर्ने जोखिम कम छ । देशको भूगोल, हावापानीले पनि फरक पारेको छ ।
'खुल्ला ठाउँ भएकाले यहाँ संक्रमण कम फैलिएको हो,’ डा. सिम्खडाले भने, ‘युरोेप, अमेरिकामा अत्यधिक भीड भएकाले महामारीको रूपमा फैलिएको हो ।’
अब नेपालमा पनि खराब स्थिति
नेपालमा खुल्ला ठाउँ भएकाले संक्रमण विस्तारै फैलिने उनी बताउँछन् । ‘नेपालीलाई लाग्दैन । इम्युनिटी पावर छ । यहाँको भाइरस फरक हो । हामी बलिया छौँ भन्नु भ्रम हो,’ उनले भने, ‘मेक्सिको, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, ब्राजिलले अमेरिकामा हुने भाइरस हो भनेर बसे । अहिले ती देशमा संक्रमण बढेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ ।’
नेपालमा अब खराब दिन आउने उनको बुझाइ छ । ‘नेपालमा खराब दिन आउने सम्भावना छ । भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने संक्रमित बिरामीकाे ज्यान बचाउन गाह्रो छ । भेन्टिलेटरमा पुर्‍याउने अवस्था कम गराउनुपर्छ,’ उनले भने ।
बाहिरको जस्तो यहाँ मान्छे मर्दैनन्
खराब स्थिति आए पनि अरु देशको जस्तो मान्छे धेरै मर्ने सम्भावना कम छ । ‘नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या कम छ,’ उनले भने,‘ बाहिर जसरी मान्छे मरेका छन् । त्यो जस्तो अवस्था नेपालमा हुँदैन ।’
‘नेपालमा अहिलेसम्म योङलाई देखिएको छ,’ उनले भने, ‘८० प्रतिशतलाई लक्षण पनि देखिँदैन । लक्षण नै नदेखी आफैँ ठीक हुन्छ । भाइरस संक्रमण हुँदैमा मरिने पनि होइन ।’
युरोप, अमेरिकाको जस्तो भए नेपालले थेग्न सक्दैन
हजारौैं भेन्टिलेटर, अस्पताल, डाक्टर र नर्स भएका शक्ति राष्ट्रहरूलाई अहिले हम्मेहम्मे परेको छ । यदि नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था आए थेग्न सक्ने अवस्था छैन । ‘एनएचएस अस्पतालले त थेग्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा त्यस्तो अवस्था आए कसरी नियन्त्रण गर्ने ? त्यसैले अहिले नै पूर्वतयारी गरिनुपर्छ । ’
डा. सिम्खडाले भने, 'अहिलेसम्मको तयारी समयको थियो, सरकारले राम्रो तयारी गरेको देखिँदैन । युरोप, अमेरिकाले सुरुमै तयारी नगर्दा यस्तो अवस्था भाेग्नुपर्‍याे ।'
उनले थपे, ‘लकडाउन मात्र गरेर बस्ने होइन, अब तयारी गर्न ढिला भइसकेकाे छ । अझै पनि समय छ । त्यसैले तत्काल व्यवस्थापन गर्नतिर सरकार लाग्नुपर्छ । खराब दिन आउनै दिनु हुँदैन ।’
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ४, २०७७, १८:३८:००